काठमाडौं । नेकपाको केपी ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाध्यात्मक अवस्थामा जनतामा जाने निर्णय गरेको बताएका छन् । प्रदेश १ को ओली पक्षीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले भने, 'स्थिरताका लागि केपी ओलीलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिताएर पठाइएको थियो । तर प्रधामन्त्रीले बाध्यता भन्नुभएको छ । अब अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । जब कुनै विकल्प देखिँदैन, त्यतिबेला जनतामा जानु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । त्यसैले जनताको बीचमा जानका लागि भनेर हामी अग्रसर भएका छौँ । त्यही क्रममा हामी यहाँ भेला भएका छौँ ।'
स्थिरता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि काम गरिरहेको काम किन पाच्य भएन भनेर नेम्वाङले प्रश्न गरे ।
'हामीले स्थिरताका लागि काम गरिरहेका थियौँ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालका लागि काम गरिराखेका थियौँ । त्यो दिशामा अग्रसर भइराखेका थियौँ । तर यो किन पाच्य भएन । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिराख्नु भएको थियो । महाधिवेशन गरी युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तर गर्छु भन्नुभएको थियो । नयाँ जनादेशबाट प्रधानमन्त्री पद सुम्पिने भनिराखेका बेला यस्तो किन गरियो ? किन यो ठाउँमा आइपुग्न हामी बाध्य भयौँ ?,' उनको प्रश्न छ । यो प्रश्नको जवाफ आउने दिनहरुमा आफू पाउँदै जाने उनले बताए ।
केपी ओलीलाई अस्वीकार गरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गरेर के गर्ने खोजेको हो भन्ने समेत उनले प्रश्न गरे ।
'दुई जना नेता भेट्न जानुभयो रेँ । हाम्रो प्रतिपक्षी साथीलाई भन्नुभयो रे । संसद पुनस्र्थापना गरौँ । पुनस्र्थापित संसदमा प्रधामनन्त्री तपाईँलाई नै बनाउछौँ भन्नुभयो रेँ । मैले कुुरा राम्रोसँग बुझिनँ । मलाई विश्वास लागेको छैन । फलानो फलानो जानु भएको भनेर साथीहरुले नक्सा देखाउनु भयो । मैले कता कता बिर्सिएँ । केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो ? त्यसको जवाफ खोजिरहेको छु । पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिले त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ । त्यसको जवाफ हामीले चाँडै पाउने मलाई विश्वास छ ,' उनले भने ।
यस्तै उनले आपूहरुले अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरु कसैलाई पनि कारबाही नगरेको बताए । नेम्वाङले भने, 'किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ । मैले नाम विर्सिए हाम्रो केही साथीहरुले केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रेँ । को अध्यक्ष हुनुभयो नाम विर्सिएँ मैले । हाम्रो महासचिव कमरेड विष्णु पौडेललाई पनि कारबाही गर्नुभएको सुनेँ । यो सबै बुझियो । अध्यक्ष कमरेडलाई निकालेर आफै बन्नु भएछ । महासचिवलाई निकालेर आफै बन्नु हुनेहोला । यो के गर्नु खोजेको ? यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ ?'
निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको विषय उठिरहेका र अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि छलफल भइरहेको भन्दै यस विषयमा थप नबोल्ने उनले बताए ।
शनिबार, माघ ३, २०७७, १६:१४:००
जेनिशा बाेहाेरा राष्ट्रिय नारी मानार्थ सम्मान २०७७ बाट सम्मानित २ घण्टा पहिले
नेकपा पार्टी ऋषि कट्टेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला ६ घण्टा पहिले
प्रतिनिधिसभाको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुँदै १३ घण्टा पहिले